दाम्पत्य सुख : यौनमा चरमोत्कर्ष – rastriyakhabar.com
यौन सम्बन्धका क्रममा हुने चरम सुखको प्राप्तिलाई नै अर्गेज्म भन्ने गरिन्छ । जसको अनुभव यौन गतिविधिको दौरान हुने गर्छ । यसलाई कामोन्माद र चरमोत्कर्षको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । यसको अनुभव पुरुष र महिला दुवैलाई हुने गर्छ ।
यस लेखमा पुरुष अर्गेज्म र महिला अर्गेज्म दुवैको बारेमा बताउन लागिएको छ । साथमा महिलाहरूको लागि चरम सुख पाउने तरिका, चरम सुखको अनुभव कसरी हुन्छ, महिला र पुरुषमा चरम सुखको अनुभव गर्न नसक्ने अवस्था कस्तो हो ? जस्ता कुरा यो लेखमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।
आर्गेज्म के हो ?
जब हामीलाई चरम सुखको अनुभव हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो धड्कन र सास तीव्र रुपमा बढ्ने गर्छ र सास भारी हुन सुरु हुन्छ । यी महिलाहरू लगातार उत्तेजित भइरहे भने उनीहरूले एक पटकभन्दा बढी पनि यसको अनुभव गर्न सक्छन् ।
यस दौरान एकदमै धेरै महिलाहरू इजेक्युलेट गर्ने गर्छन् । यस प्रक्रियामा तीब्र यौन उत्तेजना या चरम सुखको प्राप्ति हुने गर्छ । यही क्रममा मूत्रमार्गको नजिकै रहेको ग्रन्थीबाट तरल पदार्थको श्राब हुने गर्छ ।
पुरुषमा मांसपेशी संकुचन हुँदा लिंगबाट शुक्राणु, इज्येक्युलेट(वीर्यपात) हुने गर्छ । यसपछि पुरुष एकै समयमा दुई पटक अर्गेज्मको अनुभव गर्ने गर्छन् ।
जर्नल न्युरोक्वान्टोलोजीमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार महिला अर्गेज्म चार अलग प्रकारको (क्लिटोरल, वेजिनल, ब्लेडेड या मल्टिपल) हुने गर्छ ।
१ क्लिटोरिसको उत्तेजनाद्वारा अर्गेज्म
जसरी हामीले जान्ने गर्छाैं कि योनीमा रहेको यो बाहिरी बनावट धेरै संवेदनशील हुने गर्छ । यस बिन्दुमा ८ हजार तन्त्रिका मिल्ने गर्छ । अधिकतर महिलाहरूको तर्फबाट हाम्रो समेत यस क्षेत्रमा संवेदनशीलताको अनुभव हुने गर्छ । तर न्युयोर्कको एक यौन चिकित्सकका अनुसार सिधै क्लिटोरिसको स्पर्श गर्नुभन्दा पहिले साथीको शरीरलाई स्पर्श गर्ने, आलिंगन गर्ने वा मालिस गरेर मात्रै शारीरिक योनीमा स्पर्श गर्न सुझाव दिन्छन् ।
२ योनीको उत्तेजनाद्वारा अर्गेज्म
जीस्पोट अर्थात् योनीको ३ देखि ५ सेन्टिमिटर भित्र एक किसिमको सानो सिक्काको आकारमा एक हिस्सा हुने गर्छ । यो हिस्सा महिलालाई चरमोत्कर्षमा लैजानको लागि सहायक मान्ने गरिन्छ ।
३ योनी र क्लिटोरिस दुवैमा उत्तेजनाद्वारा अर्गेज्म
विशेषज्ञका अनुसार योनी र क्लिटोरिस दुवैमा उत्तेजनाद्वारा गरिने अर्गेज्म सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।
४ अधिक अर्गेज्म
मल्टिपल अर्गेज्ममा एकभन्दा धेरै अर्गेज्म महसुस हुने गर्छ । एक पटकको यौन सम्पर्कमा अलगअलग समयमा हुने गर्दैन । अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ कि केही महिलाहरू यदि लगातार उत्तेजित भइरहे भने एकभन्दा धेरैपटक पनि उनीहरूमा अर्गेज्मको महसुस हुन सक्छ ।
महिलालाई चरम सुख कसरी प्राप्त हुन्छ ?
प्रमुख ७ व्यवहार जो महिलाहरूको निम्न प्रतिशतमा आकर्षित गर्ने गर्छ र चरम सुख पाउनको लागि मद्दत मिल्ने गर्छ ।
१. योनी सम्भोग – ६९.९ प्रतिशत
२ अधिकपटक आलिंगन – ६२.८ प्रतिशत
३ यौन सम्पर्कको समयमा अधिकपटक किस गर्नु – ४९.३ प्रतिशत
४ यौन सम्पर्कको समयमा मीठो र रोमान्टिक कुराकानी गर्नु – ४६.६ प्रतिशत
५ ओरल यौन प्राप्त गर्नु – ४३.३
६ रोमान्टिक फिल्म देख्नु – ४१.९
महिलालाई चरम सुख पाउने तरिका
महिलाहरू सम्भोगको क्रममा तरिका नजानेर पनि चरम सुख पाउन नसकिरहेको देख्न सकिन्छ । चार चरणमा यसरी पाउन सक्छन् महिलाले यौन सम्पर्कको क्रममा चरम सुख ।
१ आफ्नो यौन स्वभावलाई सम्झिनु
यौन सम्पर्कको बारेमा आफ्नो भावना र व्यवहारलाई राम्रोसँग सम्झिनु अर्गेज्मको लागि अति आवश्यक हुन्छ । विवाहअघिको प्रेमसम्बन्ध छ भने त्यो समयमा आफ्नो साथीसँग सोधौं कि यौन सम्बन्धको लागि के सामान्य हो र के स्वस्थ कुरा हो ?
यो चरणमा हामीले आफ्नो मनमा यौनको भावना र विचार र भावनालाई जगाउन मद्दत मिल्ने गर्छ ।
२ आफैंले आफैंलाई स्पर्श गर्नु
यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा ३० मिनेटजति पहिले आधा÷एक घण्टा पहिले आफ्नै शरीरको विभिन्न भागमा स्पर्श गरेर यौनको भावना जगाउने काम गर्नु जरुरी छ । यस्तो गर्नका लागि स्नान गर्ने जस्ता विधि पनि अपनाउन सकिन्छ । यसको लागि तेल लगायतको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ । चरम सुख प्राप्तिको अघिल्लो चरणमा जानुपूर्व यो कामलाई ५ देखि १५ पटकसम्म दोहो¥याउनुहोस् ।
३. मजा पाउनको लागि स्पर्श गर्नुहोस्
हस्तमैथुन चरम सुख प्राप्त गर्नको लागि राम्रो तरिका हो । यसले छुने वा हस्तमैथुन गर्नुले हाम्रो जनेन्द्रीयमा रक्तप्रवाह बढ्न जान्छ र सम्भोग सुखलाई सजिलो बनाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
यस चरणको समयमा वयस्क हुनुको नाताले यौन अनुभव हुनु तपाईंको जीवनको स्वस्थ हिस्सा हो भन्ने महसुस पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तेस्रो चरणबाट यो कुरा पत्ता लाग्छ कि कहाँकहाँ स्पर्श गर्दा हामीलाई रमाइलो हुने गर्छ ? जब महिला पहिलोपटक यौन गर्ने वा चरम सुखको अनुभव सिक्न चाहने महिलाको लागि यो चरण सहायकसिद्ध हुने गर्छ ।
४ सुख पाउनको लागि स्पर्श गर्र्नेतर्फ फोकस गर्नुपर्छ
यदि तपाईंलाई अर्गाज्मको अनुभव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जान्नु छ भने यो प्रक्रियालाई कमसेकम १५ देखि ४५ मिनेटसम्म गर्नुहोस् । तर बारबार घडीमा ध्यान दिनु भने हुन्न । आफूभित्र रहेको कम्पन वा उत्तेजनालाई महसुस गर्नुहोस् । भावपूर्ण हुनको लागि वासना, विश्राम र कामुक फिल्म वा साहित्यको प्रयोग गरौं ।
चरम सुखको अनुभव कसरी हुन्छ ?
हरेक व्यक्ति आफ्नो तरिका, समय र एक अलग स्थितिमा चरमोत्कर्षको अनुभव गर्ने गर्छ । अर्गेज्म एउटा यस्तो अनुभव हो जो आमतरिकामा यौन उत्तेजनाको दौरान हामीमा शारीरिक अनुभवको विकास गराउँछ । अर्गेज्मको प्रतिक्रिया स्वरुप रक्तप्रवाह र कामोत्तेजनाको समयमा मांसपेशीमा तनाव बढी हुने गर्छ ।
पुरुष र महिलाको शरीरको रचना अलगअलग प्रकारको हुने गर्छ । सोही हिसाबले उनीहरुमा चरम सुखको समेत अलगअलग किसिमको अनुभव हुने गर्छ । दुवै लिंगको लागि अर्गेज्म एउटा पूर्र्ण शारीरिक प्रतिक्रिया हो । पुरुषमा यस समयमा मूत्रमार्ग, प्रोटेस्ट ग्रन्थी पेल्विक मांसपेशी आदिमा संकुचन आउने गर्छ । त्यसले वीर्यपात हुने गर्छ ।
महिलाहरूमा चरम सुखको अनुभव गर्न नसक्ने कारण
विभिन्न कारणले महिलाहरूले चरम सुखको अनुभव गर्न सक्दैनन् । ती निम्नानुसार छन् ः
१ पर्याप्त रूपमा उत्तेजना नहुनु
२ यौन सुख पाउने बारेमा चिन्ता गर्नु
३ डिप्रेसन आदिबाट ग्रस्त हुनु
४ शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुनु
५ यौन शिक्षाको कमी वा यौन सम्बन्धबाट डराउनु
६ पहिलेको दर्दनाक यौन अनुभव
पुरुषको चरमोत्कर्ष एउटा जटिल अनुभव हो । पुरुष अर्गेज्म को मुख्य कार्य वीर्यपात गर्नु हो । हालांकि सबै पुरुष अर्गेजको समय वीर्यपात गर्ने गर्दैनन् ।
वीर्यपात र तृप्ति
जसरी माथि उल्लेख गरिएको छ कि विना वीर्यपात चरम सुखको अनुभव गर्न सम्भव छ । किशोरावस्थाभन्दा पहलिे विशेष रुपले वीर्यपात नगरी चरमोत्कर्षको अनुभव गर्न सकिन्छ । यसका अलावा यस्तो पुरुष पनि हुन्छन् जो सम्भोगको केही सेकेण्ड पछिसम्म वीर्यपात गर्ने गर्दैनन् । केही पुरुष वीर्यपातको लागि नै असमर्थ हुन्छन्, तर चरम सुखको अनुभव गर्नको लागि त्यो सक्षम हुन्छ । यद्यपि पुरुषको लागि कैयौं अर्गेज्म गर्न मुस्किल हुन्छ ।
पुरुष अर्गेज्मको शारीरिक अनुभव
केशी पुरुषको अर्गेज्मको समयमा नाभीमा अनुभव हुन्छ । विशेष रूपले वृषणकोष र जननांग क्षेत्रमा यो महसुस हुन्छ ।
पुरुषमा चरम सुख प्राप्त गर्न नसक्ने कारणहरू
१. स्तम्भन दोष
२. रेट्रोग्रेड इजेक्युलेसन
४. ढिला वीर्यपात हुनु
५. बिना स्खलननको चरम सुखको प्राप्ति
चरम आनन्द प्राप्त गर्न यौन नै अनिवार्य छ ?
चरम सुख प्राप्त गर्नुपूर्व आफ्नो उत्तेजना बढाउनको लागि केही समय लिने गर्नुपर्छ । त्यसको लागि निम्न विधि हुन सक्छन् ।
१ एकले अर्काको शरीरमा स्पर्श गरौं
२ एकसाथ स्नान गरे
३ मालिस गरौं
४ किस गरौं
५ एकले अर्काेलाई सोध्न सकिन्छ कि उसलाई के धेरै मन पर्छ ?
६. आफ्नो पार्टनरको सासलाई महसुस गर्ने कोसिस गरौं ।
अर्को साताबाट नेपाल-भारत हवाई उडान सुचारु गर्ने तयारी
नेकपा सचिवालय बैठक : कुन नेताले के भने ?